कोरोना उपचारमा टेकु अस्पतालका ७ महिना, न स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, न सिल – Health Post Nepal
२०७७ भदौ ६ गते १०:१२
नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै देशभरका स्वास्थ्य संस्थाबाट अग्रमोर्चामा (फ्रन्टलाइन) मा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्य जनशक्ति संक्रमित भइसकेका छन् ।
कोरोना कहरको सुरुवातदेखि नै परीक्षण, उपचार र हेरचाहमा लागेका स्वास्थ्य संस्था र जनशक्तिको भीडमा एउटा भिन्न पहिचानसहित टेकू अस्पतालले आफ्ना जनशक्तिलाई भने संक्रमणबाट जोगाउन सकेको छ ।
धेरैले यसलाई संयोग ठान्न सक्छन । तर, उपचारका क्रममा संक्रमण रोकथामसम्बन्धी मापदण्डको कडा परिपालनाविना यो संभव नहुने विज्ञहरु बताउँछन्।
उच्च संक्रामक रोगको उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगाउँन क्षण÷क्षणमा ख्याल राखेर काम गर्नुपर्छ त्यो पनि तोकिएको विधि र प्रक्रियालाई ख्याल गरेर । नेपालमा उहानबाट आएका पहिलो संक्रमितदेखि नै टेकू अस्पतालमा उपचार सुरु भएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा कहलिएका सरकारी र निजी अस्पतालमा पनि ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित र त्यो भन्दा अझै धेरै स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको उचित प्रयोग र इन्फेक्सन–प्रिभेन्सनसम्बन्धी मापदण्ड पालनाकै कारण यो सबै संभव भएको बताए ।
‘इन्फेक्सन–प्रिभेसनसम्बन्धी तालिम र जोगिन तयारीको बारेमा ज्ञान भएकै कारण यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले संक्रमणबाट आफूलाई जोगाउन सकेको अस्पतालका ट्रपिकल मेडिसिनका चिफ कन्सल्ट्यान्ट डा. अनुप बास्तोलाले बताए ।
उच्च संक्रमक रोगको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण नहोस भनेर पूर्ण सावधानी अपनाएर काम गरिएको डा. राजभण्डारी बताउँछन् ।
८७ वर्ष अघिदेखि सरुवा रोगकै उपचारका लागि स्थापना गरिएको अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी अन्य अवस्थामा पनि संक्रमण रोकथामका सन्दर्भमा सधै सचेत हुने गरेको डा. भण्डारी बताउँछन् ।
‘कोभिड अस्पताल भएको कारणले पनि सुरक्षा सामग्रीहरुको राम्रो व्यवस्थापन भइरहेको छ’ डा. बास्तोला भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म संक्रमण देखिएन भनेर खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन् किनकी, अबका दिनहरु अझै धेरै नै चुनौतीपुर्ण छन्’
स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगाउन के गर्छ अस्पतालले ?
अस्पतालले वार्डहरुमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणबाट जोगिने प्रमुख सुरक्षा कवज (पिपिई)को व्यवस्था गर्ने गरेको छ। तर, अन्य अस्पतालले फ्रन्टलाइनमा रहेका सबै स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षा साम्रगी उपलब्ध गर्न सकेको छैनन। अन्य अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी आफैले मास्क तथा अन्य सुरक्षा–साम्रगी किन्न पर्ने बाध्यता रहेको डा. राजभण्डारी बताउँछन्।
‘म अन्य अस्पतालमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सोध्छु चिकित्सकहरुले समेत आफैंले मास्क तथा पिपिई किन्नुपर्ने परेको गुनासो गर्दै आउनु भएको छ।’ उनले भने । उनले टेकूमा भने एकपटक प्रयोग गरिएको सामग्री ‘डिस्पोज’ गर्ने गरेको बताए ।
‘नेगेटिभ प्रेसर’को प्रयोग
अस्पतालले आईसीयूमा कोभिडको बिरामी राख्दा ‘नेगेटिभ प्रेसर’ प्रयोग गर्दै आएको छ। जहाँको बिरामीले श्वास फेरेको हावालाई छानेर बाहिर पठाउने गरिन्छ। जसले केहि हदसम्म संक्रमणलाई फैलन रोक्ने डा. बास्तोला बताउँछन्। तर, ‘नेगेटिभ प्रेसर’ सेवा अन्य सरकारी अस्पतालमा रहेको छैन।
रोबर्टबाट संक्रमितलाई खाना र औषधी
अस्पताले पिपिई बचत गर्न र अत्यवश्यक अवस्थामाबाहेक संक्रमितसँगको स्वास्थ्यकर्मीको एक्सपोजलाई घटाउन आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई सिससी क्यामराबाट निगरानी गर्छ ।
त्यसैगरी संक्रमितलाई खाना र औषधि पुर्याउन पपनि रोबर्ट प्रविधिको प्रयोग गर्ने गरेको छ । उनले प्रत्यक्ष भेटघाट घटाएपनि समय–समयमा स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमितबीचमा फोनबाट सम्पर्क भइरहने गरेको बताए ।
डा. राजभण्डारीका अनुसार अस्पतालले प्रत्येक बिरामीलाई उच्चरक्तचाप जाँच गर्ने सामग्री (बिपी सेट) र अक्सिजनको मात्रा नाप्ने मेसिन दिएको छ।
ती सामग्रीको प्रयोग तरीकाबाट पनि आइसोलेसनमा रहेका बिरामीलाई सिकाइने गरेको अस्पतालले जनाएको छ । जसले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीले स–साना कामका लागि संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जानुनपर्ने भएकोले त्यसले पनि जोखिम घटाउने डा. बास्तोला बताउँछन् ।
संक्रमितले प्रयोग गरेका सबै सामान अटोक्लिनिङ
अस्पतालमा संक्रमित वा स्वास्थ्यकर्मीको प्रयोग गरेको उपकरण एवं वस्तुलाई अटोक्लिनिङ गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याइन्छ । संक्रमितले लगाएको कपडा तथा बेडका कपडा सबै मेसिनमार्फत तातो पानीले धुने गरेको गरेका डा. राजभण्डारीको भनाई छ ।
पुन प्रयोग गर्न नमिल्ने सामग्री फाल्दासमेत संक्रमणमुक्त गराएर फाल्ने गरिएको छ । सकेसम्म कम जनशक्तिलाई एक्सपोज होस् भन्नकै लागि १२ घण्टा ड्यिुटी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्य अस्पतालले समूचित रुपमा जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण हुने गरेको छ ।
‘कति बिरामी भर्ना भएका छन् त्यही अनुपात हेरेर मात्रै स्वास्थ्यकर्मी खटाउँछौं सबैलाई एकैपटक काममा लगाउन्नौं’ डा. भण्डारी भन्छन् । धेरै अस्पताल एवं मेडिकल कलेजमा प्राध्यापक र विद्यार्थीलाईसमेत एकैपटक संक्रमितको उपचारमा खटाउँने गर्दा पनि समस्या आइरहेको बुझाई चिकित्सकहरुको छ ।
मनोबल बढाउन बीमा
माघ ९ गते नेपालमा पुष्टि भएको पहिलो केसको उपचार गरेसँगै अस्पतालले हालसम्म शंकास्पद तथा संक्रमितगरी१ हजारभन्दा बढीको उपचार गरिसकेको छ।
३ सयभन्दा बढी उपचार गरेर निको पारेको र हाल ४८ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
सुरुदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउनको लागि जोखिम भत्ता तथा कोरोना बीमा गरिएको डा. राजभण्डारीले बताए। ‘जोखिमको आधारमा स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छौ,’ डा. राजभण्डारीले भने, ‘हालसम्म अस्पतालका २ सय ७५ स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना बीमा भइसकेको छ’
अस्पतालले जोखिम नहोस् भन्नका लागि युनिटअनुसारको टिम खटाउने गरेको र एक ठाउँको टिमलाई अर्को ठाउँमा खटाउने गरेको छैन् । ‘ओपीडी यूनिट, आकस्मिक, स्पेशल आइसोलेसन, आइसियुमा छुट्टा– छुट्टै टिमले काम गर्छन’ उनले भने ।
अस्पतालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रोटोकलअनुसार निश्चित अवधि काम गरेपछि र उच्च जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई बेला–बेलामा क्वारेन्टाइन पठाएर परीक्षणसमेत गरिरहेको छ ।
‘परीक्षण गरेर सात–दश दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि पनि पोजेभिट नदेखिएकाहरु काममा फर्किन्छन्’ उनले भने ।
अस्पतालबाट संक्रमण नफैलिए पनि अब समुदायबाट स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण सर्ने जोखिम बढेको चिकित्सक बताउँछन्। ‘अस्पतालबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुनबाट बचाउँछौ तर, समुदायबाट सर्ने जोखिम उच्च भइदिन्छ’ डा. बास्तोलाले भने ।
डा.बास्तोलाले अब समुदाय वा घर परिवारको सदस्यबाट स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण हुनसक्ने जोखिम रहेको औल्याए । डा. बास्तोला अहिले उपत्यकाको धेरै स्थानमा संक्रमण क्लस्टर रुपमा देखिएको भन्दै अगामी दिनमा समुदायमै देखिने र त्यसले अस्पतालहरु र सेवा प्रवाहमा ठूलो प्रभाव पार्ने चेतावनी दिए ।